Afgambi la sheegay in uu ka dhacay Burundi - BBC Somali
Afgambi la sheegay in uu ka dhacay Burundi
Jeneraal ciidamada Burundi ah, ayaa sheegay in saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada in ay shaqada ka eryeen madaxwayne Pierre Nkurunziza, iyadoo rabshado ay ka dhasheen qorshihiisa dib u doorashada mar sadexaad.
Hase yeeshee, ma cadda inta ay la eg tahay taageerada isaga iyo saraakiisha kaleba ay haystaan.
Madaxwayne Nkurunziza ayaa hadda ku sugan Tanzania oo uu kula kulmayo hogaamiyayaasha bariga Africa si ay dhibaatada Burundi uga wada hadlaan. La taliyayaashiisa ayaa ku tilmaamay afgambiga mid "kaftan" ah.
Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas dhab ah ku riday dad ku dibadbaxaya caasimadda Bujumbura Maanta.
Xasilooni daradu waxay bilaabatay 26 April waxaana ku dhintay in ka badan 20 qof.